2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) (51-28-5) Uzuzu uzuzu | AASraw
2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) Uzu ntụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / 2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) Uzu ntụ
SKU: 51-28-5. Category: Ọla abụba
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke 2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) ntụ ntụ (51-28-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) ntụ ntụ (51-28-5) isi agwa
aha: 2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) Uzu ntụ
Molekụla Formula: C15H32FO2P
Ọbara arọ: 294.391
Melt Point: 108-112 ° C
agba: Nchacha edo edo ma ọ bụ odo odo
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-achọ ibu ibu site na pill loss weight nọwo na ịrị elu. Ha na-aga n'Ịntanet ka ha nweta ndụmọdụ na ihe ndenye aha. DNP (C6H4N2O5) ma ọ bụ 2, 4-Dinitrophenol 51-28-5 bụ ngwakọta ngwongwo ọnụ ntụsara ahụ nke malitere na 1930 mbụ. Nchọpụta na-egosi na ọ bụrụ na mmadụ ewere 300-400 mg nke ọgwụ ahụ kwa ụbọchị, ọ ga-enwe ike ịrị elu na 36% na 95%.
Chemical Njirimara nke 2,4-Dinitrophenylhydrazine Raw ntụ ntụ
DNP na-arụ ọrụ nke proton ionophore na mkpụrụ ndụ ahụ. Proton ionophore na-ezo aka n'ụlọnga na ikike nke protons, bụ nke a makwaara dị ka mmiri cations n'ofe akụkụ nke ihe ndị dị ndụ. DNP na-ekesa proton gradient na akpụkpọ ahụ nke mitochondria ma ọ bụ chloroplast na dị ka nsonaazụ ya, ike proton, ume nke mkpụrụ ndụ dị ndụ na-eme ka ọtụtụ n'ime adenosine triphosphate (ATP) na-agbanye ike. Ọganihu nke proton na-efunahụ ike ya n'ụdị okpomọkụ karịa ume eji emepụta ATP. 2,4-Dinitrophenylhydrazine Raw ntụ bụ nke a ma ama na nyocha nchọpụta biochemistry ka ndị na-eme nchọpụta na-eji ya eme ihe mgbe nile na nchọpụta ha na-emepụta ihe ndị na-emepụta kemịlị, n'etiti usoro njem ndị ọzọ na-eme na membranes cell ndụ.
Nkọwa dị mfe nke DNP Raw ntụ ntụ
DNP, nke a na-akpọ Dnoc, Dinitro, Nitrophen ma ọ bụ Dinosan, na-ezo aka na ọrụ na-arụsi ọrụ ike bụ ọrụ kachasị ya bụ imebi ụzọ nkịtị nke mkpụrụ ndụ ndụ na-esi agba ume. Na mbido, ngwaahịa a na-egosi n'usoro ngwa ngwa oru. E wezụga iji ya mee ihe mgbawa, onyinye ahụ jikwa aka ya dị ka onye na-ebibi ihe, onye na-ese foto, onye na-echekwa osisi na nke osisi.
Maurice Tainter, onye na-eme nchọpụta na Mahadum Stanford, bụ onye mbụ na-achọpụta na ikike ọgwụ ahụ nwere ike belata ngwa ngwa. A chọpụtara ihe ahụ na 1933 ma onye nchọpụta ahụ mesịrị malite ịzụ ọgwụ ahụ dị ka nkwado na-eri nri n'elu-counter.
Usoro mmemme nke 2,4-Dinitrophenylhydrazine Raw ntụ ntụ
DNP na-arụ ọrụ site na-akpaghasị ụzọ nkịtị nke mkpụrụ ndụ na-esi na-eju ume, dịka nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ metabolic na ike ikuku nke cell dị elu site na 11% kwa 100mg. Ọ na - eme ka okpukpo ọkụ na - emepụta na mkpụrụ ndụ dị n'ime usoro a na - akpọ nkwalite. Ọgwụ ahụ na-emekwa ka cell ahụ nwere nsogbu dịkwuo ntakịrị arụmọrụ ruo na respiration dị ATP. ATP bụ ike nke ahụ mmadụ na-adabere maka ọrụ ya nile.
Mkpụrụ ndụ anyị nwere components pụrụ iche nke a maara dịka mitochondria nke ọrụ bụ isi bụ ike ike nke anyị na-eji arụ ọrụ dị iche iche. 2,4-Dinitrophenylhydrazine ntụ ntụ na-egbochi ịrụ ọrụ dị irè nke mitochondria, na-eme ka mmụba ngwa ngwa na ahụ ọkụ na ọnụ ọgụgụ na-emetụta ụbụrụ. Nrịbawanye nke mgbanwe abụọ ahụ na-ebute ọnwụ ọnwụ nke dịka 1.5kg n'izu.
Ojiji nke 2,4-Dinitrophenylhydrazine Raw ntụ ntụ
N'elu akụkọ mbụ banyere DNP site na ịcha na ụgbụ na-egosi na ọ nwere ike ime ka ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ ahụ dị ịrịba ama; a na-ejikarị ọgwụ ọjọọ eme ihe na nri ọgwụ, karịsịa na 1930s. Mgbe ọgwụ dị n'ahịa maka nanị otu afọ, Tainter bipụtara akụkọ na-eji ya mee ihe karịa ndị 100,000 nọ na United States, n'etiti ndị ọzọ n'ụwa nile.
Na-arụ ọrụ dị ka protonophore, DNP na-enye ohere ịbanye na protons site na mpechondria nke dị n'ime ya, si otú a na-agafe ATP synthase. N'ihi ya, ịrụ ọrụ ike nke ATP na-ebelata. Ụfọdụ akụkụ nke ume ume ume nke cellular ga-ala n'iyi na ụdị okpomọkụ.
Ọdịdị nke ịrụ ọrụ ike nke ATP na-adabere na dose DNP nke mmadụ na-ewe. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-eduga n'ịmalite ịrụ ọrụ ike na-arịwanye elu na ọnụọgụ nke metabolic nke na-eme ka abụba abụba. N'ihi nke a, DNP bụ otu n'ime ndị na-eme ka ndị na-emepụta ọgwụ phosphorylation kachasị mma.
Ngwakọta nke DNP Raw ntụ ntụ (51-28-5)
Anyị na-atụ aro ka a na-emepụta otu ụbọchị kwa ụbọchị site na 200mg ruo 400 mg. A ga-ewe ụbọchị izu abụọ maka izu abụọ.
2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) Nlekọta ntụ ntụ
Mmetụta nke 2, 4-DNP na-agụnyekarị mmụba na ọnụ ọgụgụ metabolic basal, okpomọkụ na ọnya (na ndị mmadụ). N'ihi ya, ahụ na-eme ka ọnụma respiration ya dị ka ụzọ nke ịkwụ ụgwọ maka mgbanwe iji wepụta oxygen. Nrịbawanye n'ime okpomọkụ nke anụ ahụ na-eme ka vasodilation dị elu mee ka ahụ dị jụụ ka ọnụ ọgụgụ ụba na-abawanye iji nwee ike ịchịkwa mgbasa.
Ihe ngosi nke oge
Ọ bụrụ na ọ bụla ohere ị na-eku ume ya, ma ọ bụ abata n'ime ahụ gị, Dinitrophenol nwere ike imetụta gị n'ụzọ dị njọ. Idozi ogwu ma o bu ihu anya gi na ogwu nwere ike ime ka iwe di oke. Ọgwụ ọjọọ nwere ike imetụta ọkpụkpụ ahụ, nke na-eduga n'ịdị elu nke okpomọkụ.
E wezụga nke ahụ, mmetụta nke Dinitrophenol na usoro nhụjuanya nke akụkụ ụwa nwere ike ime ka ị ghara ịda mbà ma ọ bụ ntụgharị "ntụgharị na mkpa". I nwekwara ike inwe nkwarụ aka na ụkwụ site na ọgwụ.
Mmetụta ndị ọzọ na-apụta na ịmịnye ọgwụ ọjọọ gụnyere egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ na akpụkpọ ahụ, ọkụ, isi ọwụwa, njigide, ịda mbà na ogologo oge amaghị ihe. N'ọnọdụ dị njọ metụtara ọkwa dị elu nke ọgwụ ahụ, ngụgụ nwere ike ịnwe nchịkọta nke mmiri nke pụrụ iduga ọnwụ. Ihe ngosi nwere ike ime ka mkpasu iwe na-ebute ụkwara na ume iku ume.
Ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ gị na-akpakọrịta na Dinitrophenol ugboro ugboro ma ọ bụ maka ogologo oge, ị nwere ike ịnweta:
Na-emerụ ọnyá na akụrụ
Mkpụrụ obi ọkụ
Bronchitis nke ịkọ ụkwara na ume iku ume
Ụjọ mmebi iwu
Fetus mebiri n'ime ndị ime ime (ọ bụrụ na ọ dị elu)
Mmanya n'ihi mmerụ nke mkpụrụ ndụ ọbara site na 2, 4-isomer (ọ bụrụ na ọ na-apụta ugboro ugboro)
Ọnwụ, ihe ka ukwuu n'ime awa 24 maka ikpe siri ike
Ọ bụrụ na onye ọka na-adị ndụ na-egbu oge nke ọgwụ ọjọọ ahụ ji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ ga-abụ na ọ ga-anabata nsogbu dịka enweghị afọ ojuju ma ọ bụ ọrịa ịba ọcha na-egbu egbu n'oge na-adịghị anya na ndụ ya.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị e gosipụtara ugboro ugboro na ọgwụ ahụ na-akọ mmetụta dị egwu, dịka ọmụmaatụ, inwe mmetụta siri ike na obi ụtọ karị.
2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) ntụ ntụ (51-28-5) Okwu Ikpeazụ
Ọ bụ ezie na ọ bụ ọgwụ ọjọọ na-abaghị uru, DNP nwere ike iduga ọtụtụ nsogbu ndị nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ejiri ya na-eleghara iwu kwesịrị ekwesị na nduzi nduzi ya anya. Ya mere, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Akwụkwọ akụkọ banyere ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na ahụ ike: akwụkwọ nchịkọta akụkọ nke American College of Medical Toxicology 7 (3): 205-12
Tainter, ML et al. Iji dinitrophenol na oke ibu na ihe yiri ya.Akwukwo mgbasa ozi. JAMA. 1933; 101: 1472-1475.
Dunlop, DM. N'iji 2: 4-dinitrophenol dị ka metabolic stimulant. Br Med J. 1934; 24 (1): 524-527
1 nyochaa maka 2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) Uzu ntụ
2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNP) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma